भारतीय अतिक्रमणमा परि भारतमा घर परेका पूर्वप्रधानपञ्चकाे व्यथा | Himal Times
Home Flash News भारतीय अतिक्रमणमा परि भारतमा घर परेका पूर्वप्रधानपञ्चकाे व्यथा
जतिबेला हामी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भनेर राष्ट्रिय झण्डा सहित इनरुवा सुनसरीमा विरोध प्रदर्शन गर्दैगर्दा हामी आठ जना थियौं । एकजना भाइ थपिनु भयो यहाँको गोल चोकमा । हामी नारा लगाउँदै हिंड्दा रमिता हेरेर बस्ने र हामीलाई पक्रेर प्रहरीले गाडीमा हाल्दै गर्दा पनि रमिता हेर्नेहरू त्यतै वरिपरि हुनुहुन्थ्यो ।
यसरी जनताले व्यापक बिरोध गरेपछि र जनदबाब खेप्न बाध्य भएपछि त्यो दबाबलाई केही समय पन्छाउन लिम्पियाधुरा समेत गाभेर नेपाल सरकारले संभवतः पहिलो पटक नक्सा जारी गर्यो । हामी लगायत अहिलेका सबैले नेपालको वास्तविक नक्सासम्म देख्न पायौं । यही कारणले अहिलेका सत्तावादीहरूले आफुलाई महान र ठुला राष्ट्रवादी भन्ने अवसर पाएका छन् ।
अब हेरौं हाम्रा महान राष्ट्रवादीहरूले त्यहाँ टोली पठाएर, त्यहाँका मानिसहरूलाई नागरिकता दिएर, उनीहरूलाई नेपाली पहिचानसहित राष्ट्रिय झण्डा फहराउने काम कहिले गर्लान् ? त्यहाँको जमीन नापी गरेर लालपुर्जा कहिले जारी गर्छन् ?
स्मरण रहोस्, सन् १९६२ अर्थात वि.सं. २०१८ सालदेखि त्यहाँका जनता बेवारिसे छोडिएर नेपाली भएको आभास पाएका छैनन् । हजुरबुवा पुस्तालाई थाहा होला, तर बाबू पुस्ता र अहिले छोराछोरी पुस्तालाई थाहा छैन । जमीन मात्र होइन, उक्त जमीनमा भएका जनता पनि यता गाभिन्छन् नियम अनुसार । उनीहरूलाई नेपाली कहिले बनाउने ?
पूर्व प्रधानपञ्चको घर भारतमा
यो लकडाउनको समयमा जेठ आठ गते साँझ खुट्टा तन्काउन पर्यो भनेर इनरुवा ३ को सडकमा हिंड्दै थिएँ, अगाडिबाट दुईजना आउँदै हुनुहुन्थ्यो । एकजना त पुर्व परिचित र हाल अवकास प्राप्त शिक्षक अमिरिलाल यादव हुनुहुन्थ्यो । गफ गर्दैजाँदा थाहा भयो वहाँको नाम रहेछ नागेश्वर मरबैता यादव । यो नाम मैले धेरै पटक सुनेको नाम थिएँ, मेरो फेसबुकमा मित्र पनि हुनुहुन्छ । तर प्रत्यक्ष चिनजान र भेटघाट भएको थिएन ।
मैले वहाँसँग अवधलाल मरबैता को हो ? भनेर सोधें । दाइले आफ्नो ठुलोबुवा हो भन्नुभयो । म आफू श्रीपुर घरमा गएको र घरको अनि अवधलाल काकाको फोटो खिचेर ल्याएको कुरा गरें । ३÷४ जना अरु सहित गफ गर्दै जाँदा लिपुलेक, लिम्पियाधुराको पनि गफ निस्कियो । वहाँको अनुहार निरस देखियो । के बोल्नु, के नबोल्नु जस्तो भावमा वहाँले केही त भन्नुभयो । म वहाँको मनोभाव बुझ्दै थिएँ । सायद अरुले बुझे कि बुझेनन् । वहाँले प्रष्ट नबोले पनि वहाँको कुराको सार यस्तो थियो ।
सुनसरी जिल्लाको श्रीपुर गाउँ पंचायतमा मेरो आफ्नो हजुरबुवा नेवालाल मरबैताले बनाउनु भएको घरमा बसेर मेरो ठूलो बुवा ३ पटक प्रधानपंच बन्नुभयो त्यो बेलाको पंचायती व्यवस्थामा । पछि त्यो घर दसगजा पारी पारियो । तर मेरो बुवा, ठुलोबुवा लगायतले हामी नेपाली हो, यो घरजग्गा नेपालको हो भन्दै नेपाल आएर मालपोत तिरेको कागजात देखाउँदा कसैले बोलिदिएन । ठुलोबुवा काँग्रेस, एमाले तिर लाग्नु भएन । अहिले त्यो पुरानो घर भारतमा पर्छ । पञ्चायतको मान्छे भनेर नबोलेको हो कि ?
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई चिठी पठाउँदा पनि कोहि बोलेन । म कसरी बोलुँ त्यो मैले कहिल्यै नदेखेको लिम्पियाधुराको बारेमा । कसले बोलिदियो मेरो घरजग्गाको बारेमा ? वहाँको आँखाले पीडा पोखिरहेको थियो । राष्ट्रियता बोलिरहेका थियो । तर त्यसलाई मैले अनुभूति गरेर के नै पो गर्न सक्थें र ?
कुनै समय म आफू पनि पुगेको र आफुले फोटो खिचेर ल्याएको त्यो घरको तस्बिर वहाँलाई देखाएँ । वहाँले यो घर अझै पनि यस्तै अवस्थामा छ भन्नुभयो ।
पत्रकार महासंघ सुनसरीको नेतृत्वमा सुनसरीको सीमाना अवलोकन गर्न आजभन्दा आठ वर्ष पहिले हामी वहाँको घर पुगेका थियौं र केही कुराकानी गरेका थियौं । त्यतिबेला गफ गर्दा प्रधानपञ्च रहिसक्नु भएको अवधलाल मरबैताले भन्नुहुन्थ्यो, “म नेपाली हुँ, मेरो घर नेपाल मै भएको हेरेर मर्ने इच्छा छ । भारत सरकार मलाई नेपाली हो नभन, अब भारतीय हो भन । तिमीलाई के के चाहिन्छ हामी दिन्छौं । नागरिकता लिन निवेदन गर, आउ । तर म भारतको नागरिकता लिन्न । मलाई फ्रीमा ट्र्याक्टर दिन्छु भन्छ, म लिन्न ।” यसरी सरल र स्पष्ट आफ्नो राष्ट्रको माया बोक्ने अवधलाल मरबैता नेपालतिर आफ्नो जमीन देख्न नपाई बित्नुभयो ।
हामी राष्ट्रवादी भनिन रुचाउनेहरू मधेसी अनुहार देख्यो कि बिहारी भन्न हतारिन्छौं । हामीलाई यस्ता ठाउँहरू दुख्दैनन् । मौसमअनुसार कतिबेला आफुले समर्थन गरेको पार्टीले के बोल्छ र त्यो बोलेबापत देशलाई होइन, पार्टीलाई के फाइदा हुन्छ त्यहाँ हामी राष्ट्रियता खोज्छौं । हाम्रो राष्ट्रियता अहिले मौसमी राष्ट्रियता भएको छ ।
लिपुलेक र लिम्पियाधुरा मात्र होइन, हामीलाई सुस्ता, महेशपुरा, मानेभञ्ज्याङ, सुनसरीको श्रीपुर पनि समानरुपले दुख्नुपर्ने हो । तर हामी किस्ताबन्दीमा दुखाउन खोज्छौं र हाम्रो राष्ट्रियता हाम्रो रङ र भाषासँग खोज्छौं । अनि कहाँ भेटिन्छ हाम्रो राष्ट्रवाद ?nayaonline.com
Previous articleकोरोना: मलेसियामा आइतबार पनि मर्नेकाे सङ्ख्या शून्य, नयाँ संक्रमित ६० जना
Next articleप्रहरीमाथि हातपात गर्ने भक्तपुरको छुट्टाछुट्टै स्थानमा चारजना पक्राउ
आफ्नै आमाको हत्या गर्ने पक्राउ
आज मलेसियामा १ सय ११ जना नया बिरामी, ३० जना निको भए
काङ्ग्रेस नेता पौडेलद्धारा तनहुँमा पुल उद्घाटन